Ukubusa Okukhulayo Kokusesha Kwamaselula | Martech Zone
Ukuba newebhusayithi ephathekayo akuyona inketho futhi akufanele kube yi-upsell ngabathuthukisi bewebhu kulezi zinsuku. Kade sisebenza kuzinguqulo zeselula zawo wonke amasayithi ethu namasayithi amaklayenti izinyanga manje futhi kuyakhokha. Ngokwesilinganiso, sibona ukuthi ngaphezu kwezi-10% zezivakashi zamakhasimende ethu zifika ngeselula. Vuliwe Martech Zone, elungiselelwe amadivayisi eselula, siyabona ngaphezulu kwe-20% yethrafikhi yethu evela kuselula noma ithebhulethi!
IWebhu ephathekayo yinkundla ekhula ngokushesha online. Ekhaya kuma-Smartphones axhunyiwe angaphezu kwezigidigidi ezi-4, izibalo zikhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwamaselula kuzodlula ithrafikhi yedeskithophu ngonyaka we-2014. Lokhu kusho ukuthi noma ngabe uqhuba ibhizinisi elinjani, izithameli zakho zikuwebhu yeselula, futhi kufanele ufinyelele kuzo.
Kunokuziphatha okuthile ekuvakasheni kwamaselula okuhluke kakhulu kwesivakashi sewebhu esijwayelekile. Abaseshi beselula abangena kusayithi lakho bajwayele ukuvakashela ibhizinisi lakho noma bacwaninge ngokuthenga abazokwenza. I-AlchemyViral ihlanganise lokhu okufundisayo ngendlela emangalisayo infographic ekusebenzeni kweselula.
Tags: yingaboyinfographici-infographic yeselulanokwenza kahle kweselulanokwenza kahle kweselulausesho lweselulaizibalo zokusesha kweselulai-seo yeselulaseo
Uyabona Okulandwa yiGoogle?